Kitapo taratasy fanamboarana sy orinasa China JAHOO
Famaritana ny vokatra Item Cheap Recycled Custom Logo Printed Grocery Shopping Packaging Craft Brown Kraft Paper Bag Bag misy kitapo taratasy sakafon-tsakafo Size 5.25x3x8.5 santimetatra, 8 × 4.75 × 10 santimetatra, 10x5x13 santimetatra, 16x6x12 santimetatra, na namboarina. kitapo taratasy fisakafoanana 80gsm matevina, 90gsm, 100gsm ...
zavatra Kitapo vita an-tsokosoko voajanahary voajanahary vita pirinty vita amin'ny entana an-tsokosoko Craft Brown Kraft Paper Bag Miaraka amin'ny kitapo taratasy sakafo
Size 5.25x3x8.5 santimetatra, 8 × 4,75 × 10 santimetatra, 10x5x13 santimetatra, 16x6x12 santimetatra, na namboarina. kitapo taratasy fisakafoanana
hateviny 80gsm, 90gsm, 100gsm, 110gsm, 120gsm na kitapo taratasy fisakafoanana namboarina
Karazan-tsolika Kitapo taratasy fisakafoanana Soy Ink miorina amin'ny rano
ara-nofo Brown Craft / Kraft Paper, White Craft / Kraft Paper, na Custom Paper
endri-javatra FSC voamarina 100% Recyclable, fanaovana milina mandeha ho azy, Sariaka amin'ny tontolo iainana, maharitra ary marina tsara.
Karazan-tànana Tanana miolakolaka, Tanana fisaka, kofehy, Tady PP, landihazo, nylon, fantsom-paingotra na kofehy namboarina
Vita ny etona Varnishing, Glossy / Matt Lamination, Gold / Silver Hot stamping, Embossing, UV Coating, Foil Stamping, Hologram Effect, sns.
Application Fiantsenana, fanomezana, mariazy, fivarotana enta-mavesatra, fivarotana, fety, akanjo, fampiroboroboana, trano fisakafoanana sns.
taratasy fanamarinana FSC, SGS, BSCI, ISO9001: 2008, sns
Kitapo vita an-tsoratra vita amin'ny Custom Recycled Custom Printed Grocery Shopping Packaging Craft Brown Kraft Paper Bag miaraka amin'ny tahony
F: Ahoana no hatokisako anao?
A: Orinasa fanontam-pirinty any Wenzhou, Faritanin'i Zhejiang izahay. Manana milina mandroso maro izahay hiantohana ny kalitaon'ny vokatray ho an'ny mpanjifanay rehetra. Aza misalasala mitsidika anay!
F: Ahoana no ahafahako mahazo teny nalaina?
A: Mba andefaso fanontaniana izahay miaraka amin'ny fitaovana, habe, zavakanto ary habetsahana. Raha tsy izany dia azonao atao ny mandefa anay ny sary sy ny hevitra, hanome anao ny soso-kevitray matihanina izahay noho ny fangatahanao.
F: Rahoviana no halefa ny kaomiko?
A: Matetika ny fotoana famokarana dia 15-20 andro Kalandrie. Raha maika ny kaontinao dia afaka alaminay laharam-pahamehana izany. Azafady mba mifandraisa amin'ny fivarotantsika raha mila fotoana mahitsy kokoa.
F: Afaka mahazo santionany ve aho alohan'ny hametrahana baiko?
A: Afaka manome vokatra mitovy maimaimpoana novokarinay ho an'ny fanamarinana kalitao izahay, fa mandoa ny vidin'ny fandefasana fotsiny ianao. Raha te hampanjifa santionany ara-batana ianao satria ilaina ny fiampangana. Na izany aza, azo averina amin'ny famoahana betsaka izany.
A: Manaiky fomba fandoavam-bola isan-karazany izahay, toy ny T / T, antoka ara-barotra, paypal…
Ny fomba tsara indrindra dia ny baiko fiantohana ara-barotra, ny varotra ataonay dia handefa anao rohy fandoavam-bola ary afaka mandoa an-tserasera ianao.
Previous: boaty paty
Manaraka: siny taratasy